Elaine Diaz, Mpampianatra Fanaovan-gazety: Mitsapa Ny Fetran’ny Fahalalahan’ny Media Any Kiobà Ao Anaty Fiovàna Malaky Be · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2015 6:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, čeština , Español, Italiano, English
Sarin'i Elaine Diaz nomena maimaim-poana
Ny 10 Jona 2015 no niseho tao amin'ny PRI.org ito lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo momba ny mpanoratra ao amin'ny Global Voices Elaine Diaz, nataon'ny mpamokatra Joyce Hackel ho an'ny The World, ary naverina nalefa eto ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampzaràna votoaty.
Manampim-bava kokoa ireo media ao aminy i Kiobà miohatra amin'ireo firenena rehetra any Amerika. Tsy mamela ny hisian'ny gazety tsy miankina ny lalàm-panorenany. Saingy mety ho feno ny kapoakan'ireo media votsa saina tantanan'ny governemanta ankehitriny, raha hiverina any amin'ilay nosy ilay tovovavy Kiobàna iray bilaogera, amin'io herinandro ho avy io, ary hanandrana hanomboka tetikasa iray hanao gazetin'olon-tsotra amin'ny aterineto.
“Tsy miandry fanohanana betsaka avy amin'ny fitondràna aho. Miandrandra fandeferana aho, nefa tsy mitompo teny aho hoe ho afaka hiantehitra amin'izany,” hoy ilay Kiobàna Elaine Diaz, mpanoratra ilay bilaogy La Polémica Digital. “Tena ho sarotra be ny raharaha.”
Vao avy nahavita taona iray ho mpandray vatsim-pianarana Nieman tao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard i Diaz. Afaka andro vitsivitsy, hiverina any amin'ny asany amin'ny maha mpampianatra fanaovan-gazety azy izy, ao amin'ny Anjerimanontolon'i Havana ary hanokatra ny Periodismo del Barrio, ezaka iray hanosehana ny fetran'ny fanaovan-gazety fanadihadiana any Kiobà.
Hiompana amin'ireo tantaran'ireo fiarahamonina marefo ka hatramin'ny loza voajanahary ilay tetikasa, toy ireo rivodoza sy ireo ora-mikija mahery izay mpahazo matetika ny nosy.
“Tsy hoe handefa ny vaovao farany no tena tanjona lehibe ho anay,” hoy izy. “Fa ny hampandray andraikitra ny mpitondra, ny mpitondra eo an-toerana.”
Miaiky i Diaz fa tsy neken'ny governemantan'i Kiobà ny tetikasany. Ary tsy ara-dalàna ny zavatra eritreretiny hatao. Izany no antony iezahany manoratra ilay ezaka any amin'ny firenena hafa.
“Mbola eo amin'ny vinavinasa mitovy amin'ny ataon'ireo gazetin'olon-tsotra maro ao Kiobà ankehitriny izahay,” hoy izy manamarika.
Milaza i Diaz fa efa miandry ny hahazo tsindry avy amin'ny governemantan'i Kiobà izy. Fa antenainy kosa hampaharitra ilay tetikasa ny kalitaon'ny media eo an-toerana aterak'io.
Nandefa filazàna ny handray mpanao gazety miisa telo fanampiny hiaraka amin'ny ekipany ny Periodismo del Barrio. Hatreto, efa naharay fangatahana asa miisa 96 i Diaz, mihoatra lavitra noho izay noeritreretiny.
“Tsy mora matoky olona iray hanokatra media vaovao izany ny olona. Izany no antony tsy niandradràko fangatahana asa betsaka,” hoy i Diaz. “Fa mieritreritra aho hoe matoky ahy izy ireo, matoky ilay tetikasa. Fantatr'izy ireo fa hisy zavatra tena tsara hivoaka avy ao.”
Ho an'i Diaz, ny Periodismo del Barrio dia harafitra amin'ny ampahany avy amin'ireo “media madinika” izay nianarany tany Etazonia, tafiditra amin'izany ireo famoaham-baovao toy ny New Haven Independent, The Texas Tribune ary ny ProPublica. Ary vonona ny handeha haingana izy, satria milaza izy fa tsy tsapan'ireo Kiobàna ho misolo tena azy ireo ny media tantanan'ny fitondrana, ary vonona ny hiresaka momba ny famoronana zavatra vaovao.
Sarotra ny mahalala raha efa vonona sahala amin'ny fahavononan'i Diaz ihany koa ireo fitondràna ankehitriny any Kiobà. Ary tena mbola tsy fantatra mihitsy ny mety ho vokany ho an'ireo mpanao gazety izay mihantsy ireo manampahefana. Saingy vonona ny handray ny vokany i Diaz.